Unimate » Unicity – Myanmar
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများနှင့် ဇီဝဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများစသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ရောစပ်လိုက်သောအခါ Unimate သည် ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ လုပ်အားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် ပျော်ရွှင်မှု များကို နေ့စဉ် ယူဆောင်လာပြီဖြစ်သည်။
ခံနိုင်ရည် စိတ်ခံစားမှု ကျန်းမာရေး
Unimate တွင် chlorogenic acid, theobromine နှင့် triterpene စသော အာနိသင်ရှိသည့် ပမာဏများပါဝင်သည်။ ထို အာနိသင် သုံးမျိုးသည် နေ့စဉ် အသုံးပြုရသည့်လုပ်အားပမာဏနှင့် လှုပ်ရှားမှုစွမ်းရည် တွင် အရေးပါသည့် စွမ်းအား စိတ်ခံစားချက်နှင့် ကျန်းမာခြင်း စသော အကြောင်းရင်း သုံးခုတို့ကို သက်ရောက်မှုရှိစေရန် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြသည်။
The yerba mate အပင်သည် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက် အမေရိကန်၏ အစဉ်အလာဖြစ်ပြီး ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သစ်လွင်ပြီး တိုးတက်လာသောထုတ်ကုန်ကို သင့်ထံသို့ ယူဆောင်လာရန် ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံရှိ သိပ္ပံ ပညာရှင်ကြီးများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်လမ်းစဉ်ကို အသုံးပြုထားသော ကျွန်ုပ်တို့ yerba mate သည် သန့်စင်ပြီး အစဉ်အလာဖြစ်သော loose leaf mate ထက် ၁၀ဆ ပိုမို အစွမ်းထက်ပါသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ လူသားများသည် မိမိတို့ နေ့တစ်နေ့တာကို မနက်ပိုင်းတွင် ကော်ဖီ သောက်သုံးခြင်း နေ့လည်ပိုင်းတွင် နေ့လည်စာစားပြီး အချိုတည်းခြင်း ညနေပိုင်းတွင် မောပန်းမှုဖြေဖျောက်ရန် လက်ဖက်ရည် သောက်သုံးခြင်း စသော အမျိုးမျိုးသော ထုတ်ကုန်များအပေါ် မှီခိုနေကြသည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုခြင်းစီတွင် အသုံးဝင်သော ထုတ်ကုန်များရှိသည်။ သို့သော် ထိုအရာများသည်လည်း အားအင်ကုန်ခမ်းခြင်း သကြားဓာတ်နည်းပါးစေခြင်း စွဲလမ်းခြင်း စိတ်ရှုပ်လွယ်ခြင်း ခေါင်းကိုက်ခြင်း စသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိသည်။ ထိုသို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပဲ သင်ကြိုက်နှစ်သက်စေမည့် အားရှိစေသော ကောင်းကျိုးများရရှိနိုင်သော နည်းလမ်းတစ်ခုရှိမည်ဆိုပါက? ထိုနည်းလမ်းမှာ Unimate ပင်ဖြစ်သည်။
Unimate ကို အပူသောက်ပါသလား သို့မဟုတ် အအေးသောက်ပါသလား?
Unimate ကို အအေးရောအပူပါ သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
Unimate သောက်သုံးခြင်းဖြင့် မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်မည်နည်း?
Unimate တွင် chlorogenic acid, theobromine နှင့် triterpene တို့ ပါဝင်ပါသည်။
ဤ ပါဝင်ပစ္စည်းများတွင် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အဆီနှင့် ဇီဝကမ္မ စုပ်ယူခြင်းကို လျော့နည်းအောင် ကူညီပေးခြင်း စိတ်ခံစားချက်နှင့် အပန်းဖြေမှုအပေါ်သက်ရောက်သည့် အမြင်အာရုံများကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် ကောင်းမွန်သော အစာခြေခြင်းကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း စသည်တို့ပါဝင်သည်။
Unimate ကို Matcha နှင့်တွဲပြီး သောက်သုံးနိုင်ပါသလား။
သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်နှစ်ခုစလုံး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Unimate ကို မနက်ပိုင်းတွင် သောက်သုံးပေးရန်နှင့် Matcha ကိုမူ အမြင်အာရုံနှင့် ကမ္မဇီဝဆိုင်ရာ ပမာဏ ညီမျှရန်အတွက် နေ့လယ်ပိုင်းတွင် သောက်သုံးပါရန် တိုက်တွန်းပါသည်။
*ဤဖော်ပြချက်များသည် the Food and Drug Administration မှ အကဲဖြတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤထုတ်ကုန်သည် ရောဂါဖြစ်စေရန် ကုသရန် ကယ်တင်ရန် သို့မဟုတ် ရောဂါကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်း မရှိပေ။